CITIZENSHIP ara-dalàna ataon'ny INVESTMENT ho an'i Malta | 100% RATE FAHOMBIAZANA | AZO ATAO | Mangataha CITIZENSHIP BY INVESTMENT of Malta, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola Malta, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola Malta, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola Malta, citi faharoa
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta sy Golden Visa
● Zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny trano sy tany
Best Agents ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta ary Mpisolovava an'ny Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta ary ny brokers ho an'ny trano sy zom-pirenen'i Malta dia miasa miaraka amin'ny fiarovana ny mpanjifa.
Ny zom-pirenenan'ireo masoivohon'ny fampiasam-bola ho an'i Malta dia manome serivisy ho an'ny honenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao Malta, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola any Malta, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao Malta, ny zom-pirenena faharoa amin'ny fampiasam-bola any Malta, ny zom-pirenena roa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao Malta, ny zom-pirenena ary ny onenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta , zom-pirenena maharitra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta, zom-pirenena maharitra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny tetika fampiasam-bola any Malta, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny tetika fampiasam-bola any Malta, ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta, ny programa momba ny fampiasam-bola ao Malta, ny programa momba ny fampiantranoana any Malta, faharoa Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta, toeram-ponenana roa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta, toeram-ponenana sy zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta, fandaharana sy zom-pirenena amin'ny alalàn'ny fampiasam-bola any Malta, fandaharan'asa Residence economic in Malta, Residence amin'ny teti-bola fampiasam-bola ao Malta, Residence amin'ny teti-bola fampiasam-bola any Malta, faharoa pasipaoro any Malta, programa pasipaoro faharoa any Malta, pro pasipaoro faharoa gram any Malta, pasipaoro faharoa indroa ao Malta, pasipaoro faharoa ary Malta faharoa, pasipaoro diplomatika faharoa any Malta, pasipaoro faharoa amin'ny fampiasam-bola any Malta, pasipaoro zom-pirenena faharoa any Malta, tetikady pasipaoro faharoa any Malta, tetikady pasipaoro faharoa any Malta, visa volamena any Malta, visa volamena any Malta, programa visa volamena any Malta, programa visa volamena any Malta, visa volamena faharoa any Malta, programa visa volamena faharoa any Malta, visa volamena roa any Malta, zom-pirenena ary visa volamena any Malta, fonenana ary visa volamena any Malta, zom-pirenena visa volamena any Malta, drafitra visa volamena any Malta, drafitra visa volamena any Malta.
"Vahaolana 1 fijanonana" ho an'ny zom-pirenena rehetra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta miaraka amin'ny fanampiana fanampiny.
Fampiasam-bola farafahakeliny any Malta ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola: EUR 1,000,000
Fampidirana an'i Malta sy ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola
Ny nosy Maltese dia misy nosy telo lehibe: Malta, Gozo, ary Comino dia 95 km atsimo atsinanan'i Sisily ihany no nalamina ary 290 km miala ny morontsirak'i Afrika Avaratra.
I Malta dia eo amin'ny fihaonan'i Eropa, Afrika Avaratra ary Moyen Orient.
Ny morontsirak'i Malta dia tsara tarehy miaraka amin'ny seranan-tsambo marobe, tery, riandriaka, amoron-dranomasina feno ala, ary rakotra matevina. Manodidina ny 2 ka hatramin'ny 3 ora vao tonga any Malta amin'ny alàlan'ny rivotra avy amin'ny ankamaroan'ny vondrom-piarahamonina an-drenivohitra eropeana.
Misy ny fitsangatsanganana mifandimby sy tsy miato mankany Malta avy any London, Roma, Paris, Frankfurt, Bruxelles, Genève, Athens, Amsterdam, Madrid, Munich, ary Vienna, ankoatry ny hafa. Ny sidina hafa mifandimby dia miasa ihany koa avy amin'ny fanoherana any Afrika Avaratra sy Moyen Orient.
Amin'ny maha firenena UE azy, ny fepetra takian'ny Malta ho an'ny visa dia mifanaraka amin'ny paikadin'ny EU. Malta ihany koa ny mandrafitra ny ampahany amin'ny faritr'i Schengen. Isan'andro dia mitaky an'i Valletta sy Sisily ny fitaterana sambo haingana ho an'ny mpandeha, fiara, ary fiara mavesatra. Ny fitantanan-tsambo hafa dia mampifandray an'i Valletta amin'i Italia sy Afrika Avaratra. Malta dia mety ho fanapahan-kevitra mahaliana amin'ny fanombanana anao.
Amin'ny maha faritra ambany indrindra an'ny vondrona EU azy dia mety tsy ho tratran'ny rivotra Malta ianao teo aloha. Aza avela hahakivy anao anefa izany. Ankoatra ny fananana toekarena matanjaka indrindra, ny taha ambany indrindra amin'ny tsy an'asa, ary iray amin'ireo atmosfera tsara indrindra eran'izao tontolo izao, Malta dia manome fampianarana, serivisy fitsaboana ary toetr'andro azo antoka amin'ny ankapobeny.
Alohan'ny handinihanao amin'ny antsipiriany ny dikan'ny hoe miaina any Malta, dia avelao izahay hanome anao zava-misy vitsivitsy momba ny firenena. Izy dia nosy repoblika ao amin'ny Mediterane, dia olona iray avy amin'ny Vondrona Eropeana nanomboka tamin'ny 2004, ary koa mamorona ampahany amin'ny faritra Schengen hatramin'ny 2007.
Manana ny sisiny ao amin'ny fanjakana britanika i Malta, ary mifamatotra mafy amin'ny Fanjakana Mitambatra sy mpikambana ao amin'ny Commonwealth of Nations.
Izy io dia firenena manana varavarana misokatra tsy hita izay ahafahanao manome fahafaham-po manokana ny fianakavianao miaraka amin'ny rafitra klinika sy fiofanana lisitra iray. Ny fifindra-monina amin'ny firenena hafa dia mety manandrana ho anao sy ny fianakavianao indraindray, indrindra ny momba ireo ankizy. Ny zavatra iray izay mety hahatonga ny fihodinana farany ho tsotsotra kokoa ho an'ny tanora dia ny sekoly nalaina ho azy ireo.
Ny rafitry ny fiofanana any Malta dia miorina amina toerana lalina, ary ny ampahany betsaka amin'ny sekoly dia manaraka ny fandaharam-pianarana britanika miaraka amina lohahevitra marobe ahazoana / hahazoana. Tsy maintsy atao ihany koa ny andehanan'ny ankizy any an-dakilasy any Malta hatramin'ny vanim-potoana faha-16. Mampiseho kalitao avo sy torolàlana avo lenta momba ny fitantanana fitsaboana i Malta. Na ny toeram-pitsaboana tsy miankina na miankina amin'ny besinimaro dia misy ankehitriny, miaraka amin'ny fanavaozana vao haingana indrindra amin'ny sehatry ny klinika, ary tohanan'ny fikambanan'ny fiadanam-po mifantoka na aiza na aiza amin'ireo nosy.
Ny rafitry ny serivisy ara-pitsaboana any Malta dia napetraka teo amin'ireo dimy tsara indrindra teto ambonin'ny planeta nataon'ny World Health Organization. Tohanan'ny fizotran'ny fampandrosoana haingana, ny harinkarena maltese dia mitazona haingam-pandeha ambany asa amin'ny ankapobeny. Miankina amin'ny varotra tsy mahazatra ny toekarena, ny famolavolana (manokana ny fitaovana sy ny fanafody) ary ny indostrian'ny fizahan-tany. Ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena eropeana dia nampiakatra ny saran-dalana, ny indostrian'ny fizahan-tany, ary ny fampandrosoana matetika miteny. Sehatr'asa lehibe manan-danja ao Malta dia ny Eurozone, Etazonia ary Singapore.
Indostria iray hafa mandroso ny famoronana horonantsary any Malta, na inona na inona fifandrafiana mafy avy amin'ny faritra sarimihetsika hafa any Eoropa Atsinanana sy Afrika Avaratra, miaraka amin'ny Vaomieran'ny Sarimihetsika Malta manolotra fanampiana ireo mpitantana ho an'ireo fikambanan'ny sarimihetsika tsy mahazatra amin'ny famoronana sarimihetsika misongadina (Gladiator, Troy, Munich ary Count an'i Monte Cristo, ny Ady lehibe Z, ankoatry ny hafa, dia notifirina tany Malta nandritra ny roa taona lasa izay), dokambarotra ary andian-tantara. Ny hetra any Malta dia angonina mifototra amin'ny trano ary ampangaina amin'ny fidiram-bola rehetra sy ny fiakaran'ny renivohitra.
Ny fifangaroan'ny rafitry ny hetra any Malta sy ny fikambananany mpandoa hetra roa heny (mihoatra ny 70) dia midika fa, amin'ny alàlan'ny fandaminana sy ny fandaminana mety, ny mpandinika dia afaka manatanteraka fahombiazana amin'ny vola amin'ny fampiasana an'i Malta ho toy ny fototra.
Ireo fikambanana natsangana tamin'ny tombotsoan'i Malta tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny rafitra sora-baventy feno sy ny volan-trosa alaina azo averina amin'ny tombony azo amin'ny mpampiasa vola.
Malta koa dia manolotra fari-ponenana hetra mety ho an'ny olona amin'ny alàlan'ny drafitra isan-karazany hahazoana tombony ho an'ny tsy mpiorina mba hiorenan'ny toerana misy ny hetra any an-toerana.
Andininy fototra momba ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta
Fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta
Sarany fanampiny ho an'ny visa volamena ho an'ny Malta
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta
Fotoana fanodinana ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao Malta
Safidy fampiasam-bola ho an'ny Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao Malta
Maninona no mandeha amin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao Malta
Firenena tena tsara tarehy i Malta. Ny firenena dia ampahan'ny EU sy ny faritra Schengen. Malta dia manana tantara lava. Manana fari-piainana ambony ny olom-pirenena. Ny pasipaoro maltese dia manome anao ny zo hipetraka sy hivezivezy na aiza na aiza faritra EU. Hentitra ny fizotran'ny fangatahana / Ireo mpianakavy akaiky ihany no azo ampidirina ao amin'ny fangatahana zom-pirenen'i Malta.
Ny mpianakavy akaiky akaiky miankina ara-bola ihany no mety ho mahay amin'ny fampiharana ny zom-pirenena izay misy sarany fanampiny. Ny olona ao amin'ny fianakaviana dia mety ho vady, zanaka latsaky ny 18 na mihoatra ny XNUMX taona izay miankina aminao, ary ny ray aman-dreninao na ny raibe sy renibenao.
Fandrafetana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola any Malta insite
Rehefa avy monina mandritra ny 12 volana dia afaka mangataka ny zom-pirenen'i Malta ianao. Tsy midika hoe fisian'ny 12 volana eo amin'ny ara-batana eto amin'ny firenena izany, fa ny fahazoan-dàlana hipetrahana fotsiny no tokony anananao. Tsy maintsy mitazona fananana ao amin'ny firenena mandritra ny 5 taona ianao. Takiana aminao ihany koa ny fampiasam-bola amin'ny fananana ara-bola izay hankatoavin'ny governemanta Malta ary hanao fanomezana. Ny zom-pirenen'i Malta dia omena mandritra ny androm-piainana ary azo ampitaina amin'ny zanakao.
Ho an'ny zom-pirenena dia mila mampiasa vola 150,000 5 EUR amin'ny tetikasa ankatoavin'ny governemanta ianao. Tokony hotehirizina mandritra ny XNUMX taona farafahakeliny ny fampiasam-bola.
Adidinao ny mandoa vola mitentina EUR 650,000 amin'ny National Development Fund, izay tsy azo averina.
Takiana aminao koa ny hividy na hanofa fananana any Malta mandritra ny 5 taona farafaharatsiny. Raha manapa-kevitra ny hividy trano ianao dia tsy maintsy mividy farafaharatsiny 350,000 EUR. Raha tsy izany dia afaka manofa trano ianao farafahakeliny EUR 16,000 isan-taona.
Misy ihany koa ny sarany fanampiny 7,500 78,000 EUR sy ny saram-panjakana izay manomboka amin'ny EUR XNUMX. Ny sarany dia azo ovaina arakaraka ny isan'ny mpangataka sy ny taonany.
Ny ekipan'i zom-pirenena avy amin'ny Agents Investment for Malta ary zom-pirenena avy amin'ny Investment mpisolovava ho an'i Malta manome mpanjifa sy ny fianakavian'izy ireo any Malta fanohanana ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Malta, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Malta sy ireo fahafaha-mifindra monina amin'ny fifindra-monina hafa, any amin'ny firenena 37.
Manome mora vidy izahay Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Malta, amin'ny alàlan'ny takatry ny vidinay orinasan-dalàna momba ny fampiasam-bola sy ny fifindra-monina ho an'i Malta, mpisolovava momba ny fifindra-monina mora vidy ho an'i Malta, zom-pirenena zakan'ny mpanolotsaina fampiasam-bola ho an'i Malta, zom-pirenena zakan'ny mpisolovava ho an'ny fampiasam-bola ho an'i Malta ary orinasa mpanolo-tsaina momba ny fifindra-monina ho an'i Malta
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola avy any Malta.
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao Malta amin'ny alàlan'ny trano sy tany
Manome fanohanana izahay amin'ny famatsiam-bola any Malta miaraka amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa fa tokony hahazo tombony tsara amin'ny famatsiam-bola any Malta izy ireo, isaky ny te-hiala amin'ny fampiasam-bola ataon'izy ireo izy ireo noho ny zom-pirenenan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta. Manana fifandraisana amina mpandrindra trano sy tany vitsivitsy faran'izay tsara eto Malta izahay izay manana rakitsoratra tsara ary ny taniny dia any amin'ny toerana tsara any Malta, ary mahazo valiny tsara indrindra.
Mila fantarina - Citizenship Malta amin'ny fampiasam-bola
Ny zom-pirenen'ny mpisolovava ho an'ny fampiasam-bola ho an'i Malta dia hanome fanampiana an-tsipiriany momba ny zom-pirenena mahomby amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta. Ny serivisy mahazatra ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta dia misy:
Miorina amin'ny fahazotoana voalohany izahay, mba hanomanana tatitra alohan'ny hanolorana azy ho olom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta ho an'ny mpanjifa hahazoana ny zom-pirenenan'i Malta ary hampihena ny risika fandavana.
Mba hahafahantsika miroso amin'ny zom-pirenenanay amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'i Malta dia mila kopian'ny pasipaoron'ny mpanjifa sy fianakaviana izahay.
Fandikana sy fanekena ny taratasy zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'i Malta. Ireo mpisolovava manokanay momba ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta sy ny visa volamena dia hanampy amin'ny famenoana endrika sy antontan-taratasy.
Vantany vao vonona ny antontan-taratasinao sy ny fianakavianao momba ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'i Malta, dia hofenoinay tompon'andraikitra isan-tsokajiny any Malta izany.
Vantany vao ekena ny fangatahana ho Citizenship amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola an'i Malta, dia mizara ny vaovao tsara aminao izahay ary manomboka miomana amin'ny fanohanana hafa.
Tsy manohana na manome zom-pirenena amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola any Malta izahay ho an'olona na orinasa voalaza etsy ambany:
zom-pirenena amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Malta dia tsy atolotra ho an'ny Mpivarotra na mpaninjara fitaovam-piadiana sy bala na avy any Malta.
zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ho an'i Malta dia tsy atolotra amin'ny fanaraha-maso ara-teknika any Malta na fitsikilovana indostrialy ny programa fampiasam-bola ao na avy na ho any Malta.
zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fakan-kevitra momba ny fampiasam-bola ho an'i Malta dia tsy atolotra ho an'ny hetsika tsy ara-dalàna na heloka bevava any Malta.
zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fanampiana ara-bola ho an'i Malta dia tsy natao ho an'ny olona mifandraika amin'ny Genetic material any Malta.
zom-pirenena amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Malta dia tsy natao ho an'ny orinasa miady amin'ny fitaovam-piadiana biolojika na nokleary mampidi-doza na mampidi-doza any Malta.
zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola Ny fanohanana an'i Malta dia tsy misy ho an'ny olona ho an'ny Malta mifandraika amin'ny varotra, fitehirizana any Malta, na fitaterana taova olombelona.
zom-pirenena amin'ny fampiasam-bola ho an'i Malta dia tsy natao ho an'ny maso ivoho tsy ara-dalàna.
zom-pirenena serivisy fandaharana ho an'i Malta dia tsy natao ho an'ny antokom-pinoana sy ny fiantrana any Malta.
zom-pirenena amin'ny serivisy fampiasam-bola ao Malta dia tsy omena ny olona manao sary vetaveta any Malta.
Ny zom-pirenentsika mpisolovava ao Malta Aza manohana ny fandraharahana mivarotra fanafody amin'ny zava-mahadomelina any Malta.
“Fanamarihana lehibe : Ny MM Solutions INC dia mitaky fitandremana araka ny antonony mba hametrahana mialoha ireo antontan-taratasy AML ho an'ny mpanjifa ho an'i Malta sy ny KYC saingy tsy ekenay ny tompon'andraikitra amin'ny fanilihana avy amin'ny manampahefana any Malta ho fankatoavana ny fangatahana. zom-pirenena amin'ny fampiasam-bola any Malta.
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta sy any amin'ny firenena hafa, miampy fanampiana maro hafa.
Manome zom-pirenenan'olom-pirenena tsara indrindra izahay amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny fampiasam-bola any Malta ho an'ny famatsiam-bola, fifindra-monina ary drafitra fananana any Malta.
Manohana ny zom-pirenena iraisam-pirenena amin'ny traikefa fampiasam-bola sy ny takian'ny lalàna any Malta, manamboatra vahaolana tsara indrindra izahay.
Ny zom-pirenenanay amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Malta dia manome ny vidiny mora indrindra, miaraka amin'ny taha mahomby azo tratrarina indrindra ho an'i Malta.
Naharitra traikefa an-taonany maro momba ny zom-pirenena roa ho an'ny Malta manohana mpanjifa sy ny fianakavian'izy ireo ho an'i Malta.
Zom-pirenena za-draharaha avy amin'ireo mpisolovava amin'ny fampiasam-bola ho an'i Malta sy ireo mpiasan'ny lalàna ho an'i Malta manome fanohanana ny mpanjifa.
Alohan'ny maha-Citizenship anao an'i Malta ary aorian'ny fankatoavana, ny mpikambana ao amin'ny ekipa zokinay dia ho eo eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha na fanampiana manokana an'i Malta
Manana traikefa iraisam-pirenena amin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola izahay, anisan'izany i Malta, manampy ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao amin'ny serivisy tsara indrindra.
Raha sanatria, tsy mahomby ny zom-pirenenanao amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta, misy firenena 36 hafa izay tompoinay, vonona miaraka amin'ny drafitra B izahay.
Kajy ny vidin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta
Mba hikajiana ny vidin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta azafady fenoy ny antsipiriany rehetra ao anatin'izany ny olona ao amin'ny fianakaviana sy ny taonany. Noho ny mpanjifa marobe ho an'i Malta dia afaka manome serivisy tsara kokoa izahay amin'ny vidiny mirary. Ny kajy dia misy, ny vidiny ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ho an'i Malta sy ny fiampangana hafa.
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta sy serivisy hafa
Ankoatry ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fanoloran-tena momba ny fampiasam-bola ho an'i Malta, dia manome serivisy, serivisy IT sy HR ihany koa izahay any Malta, izay tsy hitanao eo ambanin'ny elo iray nomen'ny mpanolotsaina hafa ho an'i Malta ka nahatonga anay fivarotana iray ho an'ny Malta sy firenena 106.
Manohana ny lalan'ny mpanjifanay mihoatra ny zom-pirenena izahay amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta miaraka amin'ny fanampian'ny mpisolovava anay, mpanolo-tsaina anay ary mpamatsy vola any Malta sy iraisam-pirenena.
Aorian'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho Malta raha mikasa ny manomboka orinasa amin'ny fividianana orinasa efa misy any Malta ho an'ny fanombohana eo noho eo any Malta.
Aorian'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta, manangana orinasa ao Malta.
Mpisolovava amin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta
Manome vahaolana mizaka ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta izahay ary zava-dehibe ny fahombiazan'ny mpanjifanay, ho an'i Malta, mpitarika izahay, ny orinasanay ho an'ny Malta dia manana mpiasan'ny fifindra-monina tsara indrindra any Malta koa, manana ny lazany izahay amin'ny fanomezana traikefa mpanjifa tsara indrindra ho an'i Malta. vahaolana mazava momba ny fampiasam-bola stratejika ho an'ny olona Malta sy ny fianakaviany. Ny zom-pirenenanay amin'ny alàlan'ny ekipa fampiasam-bola ho an'i Malta dia manome vahaolana namboarina ho fahombiazan'ny mpanjifa.
Ny fahefan'ny mpisolovava an'i Malta dia takiana amin'ny hetsika ara-dalàna ho anao amin'ny alàlan'ny zom-pirenena avy amin'ireo mpisolovava mpamatsy vola any Malta. Raha any Malta ianao na mikasa ny hitsidika an'i Malta, dia azonao atao ny mahazo etoana ny fahefanao mpisolovava.
Fanontaniana napetraka matetika - Zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta
Inona ny fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta?
Fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta dia EUR 1,000,000.
Manome fanampiana ara-dalàna an'i Malta ho an'ny zom-pirenena amin'ny fampiasam-bola ve ianao?
Eny, ny mpisolovava anay any Malta sy ireo masoivohon'ny Malta dia manome fanampiana ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta.
Mandany vola ve ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Malta?
Ny sandan'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta ary ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fitakiana tahiry fampiasam-bola ho an'i Malta dia ho an'ny olona manana harato ambony, tsy miantoka afa-tsy ny saram-pakan-kevitra momba ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta izahay, manome ihany koa fanampiana maro hafa ho an'ny zom-pirenena amin'ny vahaolana Investment.
Iza amin'ireo mponina no afaka mangataka ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Malta na visa ho an'ny mpampiasa vola any Malta?
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'ny fampiasam-bola dia azo ampiasain'ny olom-pirenena na firenena inona na inona, saingy ohatra vitsy monja dia ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Malta avy any Azia, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Malta avy any Afrika, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Malta avy any Eropa, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Malta avy any Amerika atsimo, Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Malta avy any Malezia, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta avy any Bangladesh, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta avy any Indonezia, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Malta avy any Sri Lanka, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Malta avy any Nepal, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Malta avy any India ary ny zom-pirenena tamin'ny fampiasam-bola ho an'i Malta avy any UAE.
Zom-pirenena mizaka tena amin'ny alàlan'ny fitarihana fitarihana ho an'i Malta
Mangataha torohevitra maimaim-poana ho an'ny zom-pirenenananao amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Malta
Teny manan-danja amin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Malta